I-Delta Airlines ichaphazela i-gab spikes ngaphezulu kwegunya elitsha lokugonya le-COVID-19
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-Delta Airlines ichaphazela i-gab spikes ngaphezulu kwegunya elitsha lokugonya le-COVID-19
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukwaphula iindaba zase-US • Ukuhamba ngeshishini • inkcubeko • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Nge-Agasti, incoko emangazayo phakathi kwabaphembeleli abakwi-Delta Air Lines yaqatshelwa xa inkampani yabhengeza ukuba inyanzelise i-US $ 200 ngenyanga ngaphezulu kwabasebenzi abangagonyelwanga i-COVID-19.
Iinkampani zase-US ziza nezicwangciso zokugonya ze-COVID-29.
I-Delta Air Lines iya kunyanzelisa i-200 yeedola ngenyanga kubasebenzi abangagonywanga.
Isicwangciso se-Delta Air Lines sikhokelele ekunyukeni kwe-150% kwiincoko ezinefuthe.
Iinkampani ezininzi zeza nezicwangciso zesigunyaziso sokugonya emva kokuvunywa kwe-US Food and Drug Administration's (FDA) kugonyo lwe-Pfizer-BioNTech COVID-19 ngo-Agasti 2021. IDelta Air Lines, Inc (Delta Air Lines) nayo yathatha amanyathelo angqingqwa okukhuthaza abasebenzi ngokuthi ukonyusa ipremiyamu yokhathalelo lwempilo lwabasebenzi abangagonywanga kwisicwangciso sabo sokhathalelo lwempilo kwaye bahlangabezane nokunyuka okulindelekileyo kwimfuno yokuhamba. Oku kukhokelele kukonyuka okumangalisayo kwe-150% kwiincoko ezinefuthe malunga 'nezitofu zokugonya' kwi-Delta Air Lines yenkampani ephembelela kwideshibhodi ngeentsuku ezingama-90 ezidlulileyo (ngoJuni-Agasti), kwiinyanga ezintathu ezidlulileyo.
Abaphembeleli babone oku njengeqhinga lokugqibela labasebenzi be-cajole ekubeni babe ne-jab ye-COVID-19, njengoko iimeko zosulelo ezonyukayo ziye zasibekela ecaleni inqwelo moya. Iimvakalelo zempembelelo nazo zazintle ngeli nyathelo njengoko linyathelo eliyimfuneko lokujongana nemingcipheko yemali enxulumene noko kuba ukuhlala esibhedlele okuqhelekileyo kwe-COVID-19 kuxabisa inqwelo moya kwi-US $ 50,000 ngomntu ngamnye.
Nge-Agasti, enye into eyonyukayo kwincoko yabaphembeleli yaqatshelwa xa inkampani yeenqwelomoya yabhengeza ukusebenzisana kwayo nomqhubi kaloliwe waseFransi-Belgian ohamba ngesantya esiphezulu uThalys ukubonelela ngonxibelelwano phakathi koololiwe phakathi kweAmsterdam kunye nezixeko zaseBelgium eBrussels naseAntwerp.
Ngokukwanjalo, kwabakho ukukhula okubukhali kwiincoko ezinefuthe ngoJulayi, xa inqwelo-moya esekwe e-Atlanta yaxela inzuzo yayo yokuqala yekota ukusukela oko kwaqala ubhubhane we-COVID-19, emva kokophula ikota ezintlanu zelahleko. Ukunyuka kokuhamba kwexesha lokuzonwabisa kunye nokuhamba kweshishini kunye noncedo lukarhulumente uxhase iDelta Air Lines ukufezekisa ingeniso yekota ye-US $ 652m kwi-Q2 2021.
I-Delta Air Lines yabhengeza isicwangciso sayo esimangalisayo ngoJuni sokuqesha ngaphezulu kwe-1,000 abaqhubi beenqwelomoya ngehlobo lowe-2022, ngolindelo lokonyuka kwemfuno yokuhamba emva kokuchacha kubhubhane. Oku kukhokelele kukonyuka kweencoko ezinefuthe ngoJuni.
Isiseko sedatha yeJob Analytics ityhila ukuba uninzi lwe-2020, inkampani yabona ukuthunyelwa kwamanani emisebenzi. Nangona kunjalo, i-Delta Air Lines ibone ukunyuka kokuqesha ngo-2021. Uluhlu lonyukile ukusuka kwimisebenzi eli-101 ngoJanuwari 2021 ukuya kwimisebenzi engama-474 ngo-Agasti ka-2021, kuthunyelwa imisebenzi ukubona ukunyusa okungama-55% phakathi kwe-Q2 2021 kunye ne-Q3 2021.
Imigca yomoya eDelta inyusa ukuqeshwa ngo-2021 ukuhlangabezana neemfuno eziphezulu zokuhamba. Ukongeza, ukuqeshwa kwenkampani kubandakanya inani elikhulu leendima zokugcina ixesha lonyaka ezifana neearhente zenkonzo yabathengi, iiarhente zetikiti / isango, iiarhente zenkonzo yemithwalo zibonisiwe. Ukuqesha iingcali zeenqwelomoya kunye neenjineli.
Indlela yeNASA yokulwa neNkanyamba uGobally